Khibradeyda kadib 6 bilood adoo adeegsanaya Linux - Ikkaro
Inicio >> Software >> Linux >> Lix bilood oo Linux ah
Lix bilood oo Linux ah
Dhawaan dad badan oo ka mid ah beeshayda ayaa i weydiiya Linux, xitaa waxay rabaan inaad rakibto si aad u tijaabiso. Marka hadda oo aan u adeegsanayay Linux muddo 6 bilood ah wax walba, waxaan u maleynayaa inay tahay waqti ku habboon inaan la wadaago khibradeyda.
Adeegso Ubuntu muddo 6 sano ah laptop-ka laakiin ma aha hab deg deg ah ama shaqo, Laptop-ka waxaa loogu talo galay waqtiga firaaqada, fuulitaanka iyo qaar ka mid ah waxyaabaha Arduino. Muddo dheer ayaan isku dayay inaan rakibo xoogaa qeybinta kombuyuutarkayga, laakiin muuqaalkeygii hore ee GForce 240T ayaa sawiro siiyay dhibaatooyin inkasta oo ay isku dayeen inay iga caawiyaan inaan saxo dhibaatooyinka oo aan rakibo darawallada saxda ah, aakhirkii waan daalay oo waxaan kusii waday Windows 7 ka dibna 10. Waxaan isku dayay Debian, Ubuntu, Linux Mint, iyo qaar kale oo intaas ka badanna ma rakibi karin. Runtu waxay tahay inaanan sii xasuusan haddii aan isku dayay wax aan ku saleysneyn Debian.
Laakiin dhawr bilood ka hor waxaan ku lahaa Manjaro distro diyaar ah USB-ga waxaanan u maleeyay sababta? oo arag meesha ay ka shaqaysay iyo waliba wax weyn. Waan jeclahay Manjaro. Waxaan isticmaalayay qeybintaan mudo bil ah waxaan jeclaaday Mawduucan Maia. Laakiin waxaa jiray wax cusbooneysiin ah oo mar labaad dhibaatooyin ka wada helay dhammaan Nvidia (Waxyaabaha sii deynta Rolling?) Marka waxaan isku dayay Kubuntu, oo aan waligeed awoodin inay rakibto oo aan wax dhibaato ah qabin. Oo sidaas Waxaan isticmaalayay Kubuntu in ka badan 6 bilood maalintayda.
Kuwa aan garanayn waxaan u shaqeeyaa sidii Maamulaha Mashruuca ee shabakad blog ah, nooc ka mid ah Maamulaha Websaytka. Waxa aan u baahanahay waa biraawsarro badan, FTP iyo tifaftire qoraal. Taas waxaan ku badbaadi karaa in ka badan si aad u wanaagsan. Aad uma xannibayo :)
Anigu khabiir kuma ihi Linux laakiin macnaheedu ma aha 6 bilood gudahood inaan furo Windows gabi ahaanba. Gabi ahaanba maya. Waxba igama seegto (sidoo kale malaha notepad ++) iyo khibradeyda adeegsigeygu aad ayey u fiicnaayeen. Shilalka qaarkood gaar ahaan Firefox, laakiin sidoo kale waxay ku lahaayeen Windows iyo taas ka shaqeysiinta luqadaha kala duwan waxay umuuqataa in lawaayay iyo qaar ka mid ah arrimaha la laalaada KDEnlive. My 4 gigs ee RAM ma caawiyo. Shaqadayda waa caadi in la furo 10 - 20 tabs oo badanaa waxay qaadataa in ka badan 2 gig. Laakiin ha u arkin farxadda ay siineyso in wax waliba dhaqaaqayaan, oo aysan cusbooneysiineynin markay rabto oo ay iloobaan haddii aad isticmaasho ama aadan isticmaalin barnaamijyo burcad-badeed, shatiyo, iwm.
Ma sameyn 'rakibid' sax ah oo aan ka fikirayo inay noqoneyso wax ku meel gaar ah, iyo inaan doonayo inaan iibsado SSD, xaqiiqdii, waxay ku jirtaa diskiga addoonta, laakiin maadaama aan arko inay tani sii socoto muddo dheer waxaan haysan doonaa si loo khafiifiyo. Sannad isticmaalka ka dib, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan kuu sheego sida ay wax u wada shaqeeyaan.
Waan fahmay taas Haddii aad tahay xirfadle ama isticmaale sare oo qalab sida Photoshop ama Autocad, ma siin kartid, laakiin haddii kale, waxaa jira qaabab kale oo haddii aad sameyso cilmi baaris ay fududahay inaad iyaga jeceshahay.
Waan la jiraa Kubuntu 16.10 oo wata Plasma 5.8.5 iyo Maia theme. Maalinteyda maalin ilaa maalin waxaan isticmaalaa
Baadiyeyaal, aaladdayda shaqada ugu muhiimsan (Firefox iyo Chromium, xilligan xaadirka ah ee Chrome waan ka tagay inkasta oo lagu rakibi karo sida Opera)
Spotify inaad dhageysato muusikada markaad shaqeyneyso
Filezilla, macmiil ahaan FTP
KDEll, tafatirka fiidiyowga
Vokoscreen, kazam si aad u qabato desktop-ka una sameyso casharro fiidiyoow ah
Maqalka si loo maqlo codka
Arduino IDE iyo Fritising
Kate leh plugins sida tifaftiraha qoraalka
Gimp si loo saxo sawirrada
Xafiiska Libre sida xafiis xafiis inkasta oo aanan si dhib leh u isticmaalin, haddana ku dhowaad dhammaan dukumiintiyada aan adeegsado waa iyada oo loo marayo Google Docs
Gwenview, daawade sawir iyo tifaftire
xpdf sida daawade pdf
KDE XiriirTan iyo markii aan haysto, kuma xiriirin taleefankayga kumbuyuutarka ...
Caliber, si loo maareeyo maktabadda
Inkscape, tafatirka sawirada vector
Software kale sida Evernote Waxaan ku isticmaalaa biraawsarka.
Maxay asxaabteyda iyo dadka i yaqaan ay iga codsadaan?
Hagaag, dadka badankood waxay xiiseynayaan Linux maxaa yeelay waxay leeyihiin dhibaatooyin gaar ahaan laptops duug ah waxayna rabaan inay awood u yeeshaan inay sii wataan adeegsigooda maaddaama ay wax ka maqleen Linux, way weydiiyaan, mararka qaarkood waxay xiiseeyaan waxa aan idhaahdo marna maahan. Badanaa ma siiyaan isku day. Xitaa markay rakibayaan, way fiiriyaan iyagoon waxba taaban, waxay dhahaan waxay doorbidaan Windows Vista ama 7, xitaa haddii buugaagtooda xusuusta aysan awood u lahayn inay socodsiiyaan.
2 sheekooyin guul
Xaaladaha aan ku rakibey Linux kuwa ugu farxadda badan waxay ahaayeen dad leh heer farsamo yar. Aabbahay iyo xaaskeyga adeerkiis, labaduba waxay ka weyn yihiin 70. Labaduba waxay barteen isticmaalka kombiyuutarka oo da 'weyn leh iyo Windows oo ay had iyo jeer iigu yeeraan dhibaatooyin digniin ah oo ay heleen oo aysan garanayn waxa ay ahaayeen, maxaa yeelay way gaabis ahaayeen, mar ama laba jeer usbuucii.
Isticmaalkeedu waa aasaasi, biraawsar, barnaamij xoogaa durdur ah, heerkiisa iyo inyar oo kale. Taas waxay ku laalaadaan kuna daboolaan baahidooda oo dhan.
Iima aysan wicin muddo bilo ah. Waqti ka waqti ayaan tagaa oo cusbooneysiiyaa wax walba waana intaas. Waa wax lala yaabo in dadka aqoonta ugu yar ee farsamada leh ay yihiin kuwa sida ugu fiican ula qabsan kara taasna waan cadeeyay intuba waa cuqdad. Iyagu ma hayaan fikrad hore loo qaatay oo ahayd in Linux ay adag tahay. Xitaa ma oga inay isticmaalaan Linux. Iyaga wixii hore u ahaa buluug hadda waa oranji iyo wax kale oo yar.
Waxaanan u maleynayaa inay tani tahay arrin ay tahay inaan tixgelinno. Markaa kuwa aan waligood arag waxa Linux u eg oo "ixtiraam" u leh, waxaan duubey shaashad si aad u aragto sida ay u shaqeyso oo aad lumiso cabsidaada.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso, waxaad dooran kartaa qaybinta ku dheji USB-ga oo tijaabi ama ku rakib qaybta. Uma baahnid wax aqoon ah tan sidoo kale, kaliya ku dhufo xiga, sida marka aad rakibayso Windows. Haddii aad hayso su'aalo ama wax aanan si fiican u sharraxin, ha ka waaban inaad ka tagto faallo.
Oo hadaad isticmaasho Linux, ma na tusi kartaa desktop-kaaga?
Sida loo rakibo Keras iyo TensorFlow oo laga helo dhabarka Ubuntu
Categories Linux Tigidhka tigidhka
Koorsooyinka korantada oo bilaash ah
Waa maxay Kippel
22 faallooyin ku saabsan "Lix bilood oo Linux ah"
Juun 22, 2017 markay ahayd 6:21 pm
Qosol badan oo aadan u isticmaalin okular si aad u daawato pdf markay tahay barnaamijka KDE ee asalka ah.
Juun 22, 2017 markay ahayd 11:43 pm
Hagaag, runtu waxay tahay anigu kamaan aqoon: S laakiin waan rakibay oo aad baan uga helay. Mabda 'ahaan, wax badan oo ka badan xpdf markaa waxaan siin doonaa dhawr maalmood oo tijaabo ah ka dibna waan doortaa ;-)
Aad baad ugu mahadsantahay soo jeedinta
June 24, 2017 at 12:34 waxaan ahay
Runtii waan jeclahay isticmaalka Linux, waxa kaliya ee xun ayaa ah in aanan heli karin bedel wanaagsan oo istuudiyaha muuqaalka ah iyo sida ay u adeegsadaan serverka SQL, way iga careysiisaa hehehe laakiin waxaan sugi doonaa inta ay meeshan joogaan inay awoodaan in si buuxda loo isticmaalo Linux.
Juun 22, 2017 markay ahayd 11:52 pm
Eeg sida ay kuugu adkayd inaad u beddesho Gnu / Linux. Aad ayaan u faraxsanahay inkasta oo aan arko in wali ay qasab tahay inaad waxyaabo badan sifayso. Okular ka sokow, sidoo kale waxaan isticmaali lahaa Krita halkii aan ka isticmaali lahaa Gimp, maktabadaha awgood. Oo haddaadan Kate ku qancin, waxaad mar walba haysataa beddelka Gedit.
Hagaag, waan faraxsanahay mana dhamayn. Hambalyo talaabada !!!
Juun 22, 2017 markay ahayd 11:56 pm
Nabade Joaquin !!
Maaha inay igu kalliftay, ee waa inaanan dhibaatada ku xallin karin garaafka aakhirkiina waan ka dheregtay.
Okular wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican. Krita waligey iskama dayin inkasta oo aan maqlay, laakiin waxaan u maleynayay inay si aad ah diirada u saareyso farsamaynta sawirada dhijitaalka ah, aan u tagno markaad ku sawirto kiniiniyada, iwm. Kate markiisiina meel buu i dhigay laakiin waan la qabsaday waana wali shaqeynayaa, waan fiicanahay, in kasta oo aan had iyo jeer ka imid Gedit oo ay ku jiraan kun qalab ah. Kuwaas haa, sidaan iri, waxa kaliya ee aan tebayaa waa Notepad ++.
July 28, 2017 saacadu markay tahay 5:47 pm
Waxaad had iyo jeer isticmaali kartaa Qamriga (https://es.wikipedia.org/wiki/Wine) si loogu rakibo barnaamijyada Windows-ka Linux. In kasta oo ay aniga ila tahay inay jiraan codsiyo isku mid ah oo si wanaagsan loo gaadhay.
Juun 23, 2017 markay ahayd 7:14 pm
Waa inaad ka taxaddartaa taladaas, xusuusnow in Krita ay diiradda saareyso sawir gacmeedka dijitaalka ah, GIMP ee ku saabsan hagaajinta sawirka, waa waxyaabo aad u kala duwan. In kasta oo Krita ay leedahay hal shay ama mid kale oo ay ku tafatirto sawirradeeda oo aan ahayn xooggeeda waxayna si aad ah ugu caddeeyeen wikikeeda.
July 27, 2017 saacadu markay tahay 5:54 pm
Waraaqda wanaagsan :)
Waxba, waxaan kaliya rabay inaan dhaho isbedelka ka yimid Windows ilaa Linux waa la ogaan karaa ... Wax badan oo wanaagsan. Waxaad helaysaa xasilooni, taas oo kugu dambaynaysa inaad dareento deganaan badan oo thatna aan qiimo lahayn.
Marka la eego Windows-ka marwalba waxaa jirtay halis ah in markii aad daarato cpu-ga aad naftaada ku aragto layaab in nidaamku uusan shaqeyn, ama uu burburo. Tani waxay ku dhacdaa Linux ma dhacdo, ama maahan inta badan ugu yaraan.
By habka, su'aal: wax dhibaato ah ma kaa qabatay inaad Linux ku rakibto laptop-ka? Waa aniga oo ku jiray gole (GNU / Linux Vagos) waqti hore oo ay jireen dhowr qof oo dhibaatooyin badan qabay.
July 28, 2017 saacadu markay tahay 2:19 pm
Waan ogahay inaad isbedelka sameysay waqti dheer kahor :)
Sida laptop-ka In kabadan maxaa yeelay waa laptop waxaad dhibaato kala kulmi kartaa qalabka uu haysto awgood. Waxaan haystaa Dell oo sida caadiga ah sifiican ula shaqeeya Linux oo waligey wax dhibaato ah kalamaan kulmin oo waxaan ku rakibay qalab badan. Dhinaca kale, kumbuyuutarka kumbuyuutarka, sawirada awgeed, waan kari waayey.
Khibradeyda ayaa ah inaan Linux ku rakibi doono ilaa 10 ama 15 laptop, netbook, qaar cusub iyo qaar duug ah wax dhibaato ahna kalama kulmin rakibida. Mid mooyaane laakiin khaladka qaladka ayuu ahaa waxkastana wuu fashilmayay.
Marka horay u soco, haa, si aad u rakibto, waxa ugu fudud ayaa ah inaad jiido USB-ga oo ka dhigaya mid lagu kaydin karo Unebotin, Universal Installer ama wax la mid ah, waxaan ku leeyahay maqaal hore halkan https://www.ikkaro.com/probar-ubuntu-usb/ , laakiin xitaa waad ku sameyn kartaa qalabka gnome disk http://gabuntu.com/2014/12/16/como-crear-un-usb-booteable-en-ubuntu-de-manera-simple/ waa wax fudud.
Oo ii sheeg
July 28, 2017 saacadu markay tahay 6:00 pm
Caadi ahaan waxaan isticmaalaa USB LIVE, laakiin dhowaan waxaan soo helay barnaamij lagu kabaha badan yahay USB-ga. Waxaa loo yaqaan YUMI (https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/). Waxaad heleysaa bogagga si aad u soo dejiso OS, Waxay yimaadaan: Ubuntu iyo kala duwanaansho, Linux mint, Debian live, Fedora, OPEN Suse, Puppy Linux iyo kala duwanaansho, Netbook, distros kale (sida Android ama Manjaro), Qalabka antivirus, Qalabka nidaamka, iyo qaar kale oo badan oo aanan xasuusan. Iyo wax walba oo aad u fudud. Sikastaba xaalku ha ahaadee, fiiri xiriirka aan kaaga tagayo wax walbana waa la sharaxay.
July 29, 2017 saacadu markay tahay 4:36 pm
Hagaag, waxaan ugu dambayntii naftayda ku dhiirigaliyay, Xubuntu. Rakibaadda ayaa si fiican u dhacday (waad ku mahadsan tahay hagaha, habka), in kasta oo aysan aqoonsanayn kaarka shabakadda wireless. Ka dib markaan isku dayay amarro kala duwan waxaan u maleynayaa inaan ku dhammaanayo u qaadista farsamayaqaan.
Marka laga reebo dhibaatadan, nidaamka qalliinka waa mid aad u qabow. Waa iftiin, waxayna leedahay waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la shaqeeyo. Waxaan haystaa laptop-ka muddo sannad ah weligoodna si dhakhso leh ugama bilaaban hadda ka hor. Waxaan ku hayaa Kubuntu miiskeyga oo wax yar ayey qaadataa in la raro.
Linux runtii way fiican tahay. :)
June 23, 2017 at 1:55 waxaan ahay
Maqaal aad u wanaagsan ayaa wanaagsan in la ogaado in dadka aan IT-ga ahayn ay sifiican ugu shaqeeyaan laynka oo ay aad uga fiican yihiin hadii ay la socoto kde hehehehe IMO-kan ugu dambeeya laakiin dagaalka ayaa lagu sameeyay faallooyinka ...
Ha iloobin kate iyo gedit (in kasta oo ay aad uga fiican yihiin qoraalada ++) isticmaal tifaftire waxyar ka fiican waxaa jira waxyaabo kale oo kaa ilaalin doona inta kale, halkan ayaa ah kuwa ugu fiican xilligan, vscode (http://code.visualstudio.com/) aad ayaan ugu guuleystey midka aan hada isticmaalo kadib markii aan soo maray liiska intiisa kale iyo kuwa kale oo badan, atom (atom.io) ikhtiyaarkeyga labaad ama sublimetext kan dambe aabihii kuwii hore iyo kuwa kale oo badan laakiin taasi wax badan ayey joojisay horumarka muddooyinkii ugu dambeeyay
June 23, 2017 at 11:27 waxaan ahay
Dagaallada faallooyinka waa la xakameynayaa. Waxaan ogolaaday faallooyinka sanado kahor intaysan toos u noolaan. Marka ama dood ayaa lagu qabtaa oo si nabad galyo ah ama looma doodo. Trolls soo galaya oo dhahaya bullshit ayaa iga baxsan.
Xagga visualstudio waan isku dayi doonaa, laakiin marwalba waxaan u maleynayay inay aad ugu badan tahay waxa aan u adeegsado, laakiin kaalay, dhammaadka wiiggan waan rakibi doonaa :)
Aad baad ugu mahadsantahay soo jeedinta.
June 23, 2017 at 9:20 waxaan ahay
Xitaa ma oga inay adeegsadaan Linux.
Waa wax lagu qoslo waxaad ka leedahay: "dadka aqoonta ugu yar ee farsamada leh, waa kuwa sida ugu habboon loo waafajiyay"
Halkaas ayaan ku siinayaa sababta ay dad badani ula qabsanin naceyb dartiis. Aaminsanaanta inay tahay inay bartaan wax cusub "laga bilaabo xoqitaanka" marka, heer aasaasi ah oo adeegsade, ficil ahaan wax waliba waa isku mid (daalacashada, qorista warqad, sawir sawir, iwm). Iyo in qunsulku yahay wax laga naxo, markay tahay qalab kale oo aad gacantaada ku hayso .. iyo wixii ka sarreeya…. barnaamijyo badan oo loogu talagalay wax kasta oo aad ka fekeri karto iyo madax-xanuun la'aan si aad ugu adeegsan karto si sharci ah (dildilaac, keylogger, iwm ...)
June 23, 2017 at 11:32 waxaan ahay
Taasi miyaa. Dad badan ayaa fura kumbuyuutarka iyagoo adeegsanaya Firefox ama Chrome, Spotify ayaa wax ka bedel ku sameeya qoraallada qaar, nuqullo iyo tirtirtaa faylasha, wali waxbay u isticmaashaa p2p waana intaas, taasna macno malahan nidaamka qalliinka ee la adeegsanayo.
Iyo wixii ka sarreeya oo aan loo baahnayn in wax la dhaco, maxaa yeelay in yar oo naga mid ah ayaa garanaya cidda iibsata softiweerka, oo ay ku jiraan shirkadaha xitaa ka sii daran.
Juun 23, 2017 markay ahayd 2:35 pm
Maqaal weyn. Waxaan isticmaali jiray Linux oo lala wadaagay Windows illaa 12 sano hadda, oo leh 2 qaybood oo kaliya haddii ay dhacdo, aniguna si dhib yar ayaan u bilaabayaa Windows. Waxaan ku bilaabay Suse, waan badalayay iminkana waxaan Xubuntu la joogay dhowr sano. Waxay la mid tahay tan kale "wax-Ubuntu", laakiin waxay cuntaa ilo yar. 4 giggaaga ah ee RAM waad isticmaali kartaa. Sidoo kale, barnaamijyada KDE (kate, kdenlive, iwm.) Si hagaagsan ayey u socdaan.
Juun 23, 2017 markay ahayd 4:14 pm
Salaan Harry, aad baad u mahadsan tahay :)
Waxaan ka fiirsanayay inaan doorto distro leh miis fudud, laakiin runtii waan jeclahay KDE. 4-ta gig waa sax laakiin waxaan kusii balaarinayaa in pc-ga uu 7 sano jirsanayo uuna mudan yahay in la koolkooliyo, lol
Su’aashu waxay tahay kumbuyuutarka gacanta kumbuyuutarka dan kama lihi inaan wax tijaabiyo, laakiin PC-ga, oo aan ugu shaqeeyo, waxaan rabaa wax xasilloon oo aan u isticmaali karo muddo dheer dhibaato la’aan. Ma doonayo inaan aado tijaabinta disha iyo disroska mar walbana dib-u-habeyn wax walba.
Juun 23, 2017 markay ahayd 7:04 pm
Ku soo dhowow adduunka Linux ee shaqada !!
Waxaan ka hoos shaqeynayay OpenSuSE, ma aqaano inta sano ee dambe, waxaan u maleynayaa inaan ku bilaabay suse 9 ...
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso, waxaan u isticmaalay * ubuntu waajibaadka, Linux Mint iyo qaar kale, iminkana ma helin wax u shaqeeya sidoo kale Yast, isku day oo ii sheeg. Waxay sidoo kale leedahay bakhaar u gaar ah oo loogu talagalay Nvidia, sidaa darteed uma maleynayo inaad dhibaatooyin badan ku qabto kaarka: D
Dhinaca kale, xoogaa nuxurka weedha ah "Waan fahamsanahay haddii aad tahay xirfadle ama adeegsade heer sare ah qalab sida Photoshop ama Autocad inaadan siin karin":
Marka hore, waxaan u maleynayaa in Gimp-ku uusan laheyn wax xaasid ah Photoshop, waligey uma isticmaalin heer xirfad, laakiin waxaan u maleynayaa inay ka badan tahay arrimaha hiwaayadeed ee isticmaalka marka loo eego isticmaalka dhabta ah, innaga oo loo adeegsado adobe ma qabno rabto inaad bedesho
Marka la eego Autocad, hadda waxaa jira waxyaabo kale oo dhab ah, sida DraftSight, oo loogu talagalay shaqooyinka 2D waxay u shaqeeyaan si isku mid ah Autocad, iyo iyada oo aan shatiyeyn ama dhibaato loo geysan. Waxaan u isticmaali jiray dhowr sano hadda oo kaliya maahan dhibaato la'aan, laakiin waxay leedahay iswaafajin badan oo leh noocyadii hore ee .dxf marka loo eego Autocad lafteeda ...
Waxaan u maleynayaa inay jiraan fikrado dhowr ah oo ay tahay in hadda la jaro, dad badan ayaa u maleynaya in Linux ay adag tahay, in Linux loogu tala galay kuwa wax jabsada, in Linux uusan laheyn barnaamijyo "xirfadleyaal ah", waana been oo dhan. Mana aha wax adag, waa wax sifiican u isticmaali kara qofkasta (runti waxaad leedahay miisas aan dhamaanayn oo aad ku doorato midka kuugu haboon baahiyahaaga ama dhadhankaaga iyo dusha sare oo leh ikhtiyaariyadaha habayn aan xad lahayn) iyo, dabcan, waxaa loo isticmaali karaa si xirfadaysan.
Iyo inaad dhameyso, waxaan kuu sheegayaa 2 kiis oo ah "linux evangelization": Aabahay iyo adeerkey. Labaduba waxay ku dhasheen 50-meeyadii iyo fikradaha hore ee Win. Markii aan Linux ku dhejiyay (waxay haysteen SuSE oo leh KDE iyo Ubuntu oo leh Gnome) waxay la qabsadeen dhib la'aan, markii ugu horreysay. Sidoo kale dhibaato la'aan virus iyo qashin kale. Isticmaalka ay siiyaan kumbuyuutarka (biraawsar, libreoffice, youtube, spotify, sawiro iyo wax kale oo yar) waa nidaamka ugu haboon.
Sii xoogaa kombiyuutarkaas, iskuday inaad wax gashado oo noo sheeg: D
Juun 26, 2017 markay ahayd 12:34 pm
ha ka shakiyin in aan isku dayi doono Furitaanka SUSE oo aan kuu sheegi doono waxa aan u maleynayo :)
Marka laga hadlayo mawduuca barnaamijyada xirfadeed, halkan waxaan ka qabaa shaki dhawr sababood awgood. Ma lihi aqoon igu filan oo ku saabsan aagaggan oo aan ku qiimeyn karo, laakiin la hadalka xirfadleyda (naqshadeynta, iwm.) Waxay ii sheegaan inay jiraan waxyaabo dhiman ama aan siinaynin ku habboonaanta aqoonta.
Dhinaca kale, waxa aan arkaa waa (heer xirfadeed) in haddii ay tahay inaad la fal gasho shirkadaha kale ee qaybta oo dhammaantoodna ay ku shaqeeyaan qaab, iswaafajinta waa inay fiicnaataa. Ka soo qaad in aad naqshad sameyso gabal aanan aqoon, albaab baabuur, waxaad u direysaa shirkada soo saareysa waxna sifiican uma xareysanayaan maxaa yeelay isku qaab kuma shaqeynaysid. Waxyaabahan lama ogolaan karo oo qatar ma gelin kartid.
Xitaa ka fudud, waxaad ku shaqeysaa heer sare oo heer sare ah, oo leh macros iwm, iyo markaad isku daydo inaad ku furto iyaga LibreOffice, wax walba way kala baxaan ...
Haddii qof kastaa isku deegaan adeegsan lahaa dhibaato ma jiri lahayd, laakiin illaa iyo inta aysan taasi ahayn waxaan u maleynayaa in nasiib daro ay unoqon doonaan dhibco badda dhexdeeda.
Juun 29, 2017 markay ahayd 1:22 pm
Waxaan waday Ubuntu ilaa 2007 inkasta oo aan haystay qayb 10 ah, waxaan kaliya u furaa waqti ka waqti xiisaha. Beddel ahaan 'Autocad' waxaan u adeegsadaa BrisCad, oo leh awood aad u la mid ah laakiin qiimo aad u jaban (oo loogu talagalay dadka cusub, sidoo kale waxaa jira barnaamijyo ganacsi oo lagu bixiyo Linux). Bedel ahaan Photoshop waxaan u isticmaalaa Gimp, ma aqaano heer xirfadeed laakiin heerka isticmaalaha gaarka loo leeyahay natiijooyinkiisu aad ayey u fiican yihiin. Barnaamijyada kale ee muhiimka ah ee loo yaqaan 'Openhot' (tafatirka fiidiyowga) ama Blender (3D sawirka).
Juun 29, 2017 markay ahayd 4:14 pm
Waa salaaman tahay Manuel. Hagaag, BricsCAD ma ogeyn. FreeCAD iyo OpenSCAD haa. Miyaad khibrad u leedahay tan dambe?
July 28, 2017 saacadu markay tahay 5:42 pm
Haye subax wanaagsan. Waxaan isticmaalaa a Linux distro ku habboon waxbarashada (waxaa loo yaqaan MAX), waad kala soo dagsan kartaa bilaash http://www.educa.madrid.org (oo ka socda Beesha Madrid si cad); oo waxaan ogaaday in badan oo ka mid ah dhibaatooyinka processor-rada iyo iswaafajinta wadayaasha Windows-ka, iyadoo Linux la waayayo, wax walbana si habsami leh ayey ku socdaan. Waxaan sidoo kale ahaa 4 bilood anigoon furin Windows. Waana jeclahay
PS: Waxaan ku rakibay Distro-ka USB-ga qaabka LIVE oo kaliya anigoo ku xiraya kumbuyuutarka markaad daaraysid oo aad u badaleyso boot-ka aaladdaas ay gasho. Waxa kale oo suurtogal ah in lagu rakibo darawalka adag halkaas.
Waxaan rajaynayaa in dad badani ay jecel yihiin oo aan ka sii gudbi karno "Windows not so cajiib" Windows. Sidoo kale waa BILAASH !!!
1 Maxaa isticmaala
2 Maxay asxaabteyda iyo dadka i yaqaan ay iga codsadaan?
3 2 sheekooyin guul